आयोमेल ! आउनैपर्ने किन? – AayoMail
आयोमेल ! आउनैपर्ने किन?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार १० गते २:४२
आयोमेल डटकम आजदेखि विशाल डिजिटल दुनियाँबाट नेपाली भाषीसँग जोडिएको छ। हामीलाई लाग्छ, यसको आगमनले नेपाली डिजिटल पत्रकारितामा नयाँ दृष्टिकोण र अनुभवसहित एउटा विशेष खाँचोसमेत पूरा गर्नेछ। नेपाली पत्रकारिताले करिब सवा सय वर्षको उमेरमा धेरै भोग्यो, जुन अधिकतर छापा पत्रकारिताका लागि थियो। संसारमै नयाँ र सदैव नवीनतामै रहने डिजिटल पत्रकारिताले चाहिँ नेपालका हकमा ठूलै हदको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने चुनौती बाँकी नै छ। त्यो चुनौती, त्यो खाँचो भनेको विश्वसनीयता नै हो।
आयोमेल डटकम जन्मिँदै विश्वसनीयताको आधार लिएर आएको छ। सत्य-निष्ठामा रहेर नेपाली पत्रकारितामा लामो समय बिताएका पत्रकार, व्यावसायिक पत्रकारितामा भविष्य खोज्ने युवा पत्रकार, निर्भिक विचार राख्ने स्तम्भकार, मिडिया मार्केटिङमा सिर्जनशीलता खोज्ने प्रबन्धकलगायतको सहभागिता र जोडबलबाट यो परियोजना सम्भव भएको हो। यसप्रति आमपाठक-दर्शकको अभिरुचि र उत्साह छोटो समयको डिजिटल प्रवर्द्धन अभियानकै क्रममा अनुभूत भइसकेको छ।
असल पत्रकारिता र समकालीन सञ्चार अभ्यासको सम्मिलन नै यो समाचार पोर्टलको चरित्र हो। सत्यतथ्यको खोजीमा सबैको भोक छ। तर, त्यसको पूर्तिमा अमानवीय व्यग्रता ग्राह्य रहन्न। हामी हाम्रो अभ्यासमा सम्मान र संवेदनाको आनुवंशिक गुण छ भन्ने प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।
सूचनाकर्मको तागतबाट आयोमेल आगमनको औचित्य स्थापित हुनेछ। र, यसका लागि धेरै लामो समय कुर्नुपर्ने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसमा हाम्रो निष्पक्ष र सन्तुलित व्यवहार पाठक-दर्शकको मन जित्ने मूल आधार रहने छ।
समकालीन आमसञ्चार क्षेत्रले छापाको वजन र डिजिटलको गतिलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ। हामी त्यसनिम्ति चेतना, अभ्यास र सिकाइबाटै प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो वर्तमान सिकाइले बुझाएको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सञ्चारमाध्यमले सूचना थोपरेर डंगुर लगाउँदैमा समकालीन पाठक-दर्शकप्रति न्याय हुँदैन। समयसीमाभित्र खबर यकिन गर्दै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा सन्तुलित विचार र अग्रदृष्टि बनाउन सहयोग पुर्‌याएर मात्रै अबको पत्रकारिताले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्छ। ‘खबरको निधो’ भन्ने नाराले हाम्रो यही कार्य-दर्शनलाई प्रष्ट पार्छ।
आयोमेल डटकमले यही कार्य-दर्शनबाट प्रेरित भएरै खबर-विशेष-प्रभाव-विचारको शृंखलालाई ‘नेभिगेसन बार’ मा राखेको छ। यसले खबरदेखि विचारसम्मको यात्रामा पाठक-दर्शकलाई व्यावसायिक मार्गदर्शक (गाइड) का रूपमा सहयोग गर्छ। आखिर सञ्चारक्षेत्रको मूल कर्तव्य नै त्यही हो। र, यो शृंखलामा मल्टिमिडिया अन्योन्याश्रित भएर जोडिन्छ। शब्दचित्रबाट अगाडि बढेर ध्वनि र दृश्यमा खेल्ने हाम्रो अभ्यासको सानो सुरुवात अहिल्यै देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई अझै व्यापक तुल्याउँदै लानेछौं।
एउटा सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा ठूलो तागत उसले पस्कने सामग्रीको गुणस्तर हो। गुणस्तरलाई नवीनता र विविधताबाट उजिल्याउने कलामा आयोमेल टिम एक कदम अगाडि छ। होमपेजमा भएका सामग्रीका प्रकार र डिजाइनबाट यो पक्ष बोधगम्य तुल्याउन खोजिएको छ।
आयोमेल भन्ने नाममै जिज्ञासा हुन सक्ने भएर हामी यहाँ केही उल्लेख गर्न चाहन्छौं। नाम एकदम सजिलो हुनुपर्ने सहज सर्तमा अडिएर हामीले ‘मेल’ अर्थात् सन्देशको क्रियात्मक गुण टिप्दै यस्तो नामकरण गरेका हौं। मेल (खासगरी इलेक्ट्रोनिक मेल) आउने-जाने क्रियामै हाम्रो अधिकांश सञ्चार व्यवहार निर्भर छ। नामको ठूलो भारीले पाठक-दर्शक र हामीबीचको सम्बन्धलाई थिचिरहनु जरुरी छैन।
कोभिड-१९ महामारी असहजताबीच हाम्रो आगमन भएको छ। संसारको रीत हो, अनुकूलता-प्रतिकूलता। सञ्चारक्षेत्र प्रतिकूलतामा झन् बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
हामीले आयोमेलको सुरुवातसँगै यहाँहरूमा बाँड्नुपर्ने अर्को खुसी पनि छ। हामीले नेपालमा स्वास्थ्यक्षेत्रको अग्रणी अनलाइन पोर्टल हेल्थपोस्टनेपाल डटकमलाई एउटै छानामुनि ल्याएका छौं। नयाँ यात्राको ६ महिनामा हेल्थपोस्टनेपालले छलाङ नै मारेको छ। तपाईहरूले यसप्रति देखाउनुभएको अतीव विश्वासप्रति हामी आभारी छौं। हामी छिट्टै अंग्रेजी भाषामा समेत नयाँ न्युजसाइट सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं।
हाम्रो सत्प्रयासप्रति विश्वस्त समस्त पाठक-दर्शक, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तकमा हार्दिक साधुवाद!
नेपइनसाइट मिडिया प्रा.लि.